Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Hospital-acquired infection ဆေးရုံ-ကူးစက်ရောဂါ
Hospital-acquired infection ဆေးရုံ-ကူးစက်ရောဂါ
Thu, Feb 28, 2013 at 12:39 PM
ဆေးရုံတွေမှတဆင့် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများထဲမှာ ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာပိုးဝင်ရောက်ခြင်းအပြင် အခြား မည်သည့်ရောဂါများ ကူးစက်နိုင်သည်ကို သိရှိလိုပါသည်ခင်ဗျာ။ ထို့အပြင် ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် လူနာအနေဖြင့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရမှုရှိ၊ မရှိ နှင့်မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ပွားရသည်ကို သိရှိလိုပါသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရဆေးရုံများ၏ သန်ရှင်းရေး အခြေအနေအပေါ် ဆရာရဲ့ သုံးသပ်ချက်အမြင်ကိုလည်း သိရှိလိုပါသည်။
ဆေးရုံတက်လူနာတွေ၊ လူနာစောင့်နဲ့ လူနာမေးလာသူတွေရော ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတိုင်းကို ဆေးရုံတွေကနေ ကူးစက်ရောဂါတွေရတယ်။ ဆေးစာနဲ့ Hospital-acquired infection ဆေးရုံရ ကူးစက်ရောဂါတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ Nosocomial infection (နိုဆိုကော်မီကယ်) ကူးစက်ရောဂါဆိုတာက ဆေးရုံဝန်းကျင်မှာ ပျော်နေကြတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကနေ ကူးစက်ရောဂါတွေ ရစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်းဂတ်စ် (မှို) တွေ၊ ဗက်တီးရီးယားတွေ။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပါဝင်တယ်။ ဝေဒနာခံစားနေရလို့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား နည်းနေသူတွေမှာ ပိုဖြစ်လာစေတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်များသလဲ ဆန်းစစ်မှုတွေ မသိပါ။ တိုးတက်မှုထိပ်ဆုံးက အမေရိကားမှာ တနှစ်ကို ဆေးရုံ ကူးစက်ရောဂါသည်ပေါင်း ၂ သန်းရှိပြီး၊ ဒီအထဲက လူနာပေါင်း ၂ သောင်း၊ သေဆုံးနေပါတယ်။ ဥရောပမှာ (ဂရမ်-အနုတ်) ဗက်တီးရီးယား အမျိုးအစားကြောင့် တနှစ်မှာ လူနာပေါင်း နှစ်သောင်းခွဲ သေဆုံးစေပါတယ်။
(နိုဆိုကော်မီကယ်) ကြောင့် အလွန်ဆိုးလှတဲ့ နူမိုးနီးယား၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ၊ သွေးထဲပိုးဝင်တာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ တခြားနေရာမှာ ပိုးဝင်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဆိုးတယ်လို့ ပြောရတာက ဒီပိုးတွေဟာ သုံးနေကြ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ခံနိုင်ကြလို့ပါ။ ဆေးရုံကပါလာပြီး နေအိမ်တွေကိုပါ ပြန့်နှံ့စေသေးတယ်။
ပိုးနာမည်တွေကို စာရင်းချရင် မနည်းလှပါ။
• Hospital-acquired pneumonia ဆေးရုံကရ နူမိုးနီးယား၊
• Gastroenteritis အစာလမ်းရောင်၊
• Vancomycin-resistant Enterococcus ဆေးယဉ်ကူးစက်ရောဂါ နဲ့
• Legionnaires' disease ရောဂါတွေရစေတယ်။
Transmission ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေကနေ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်လာသလဲ။
1. Direct contact တိုက်ရိုက်ထိစပ်ခြင်း။ အများဆုံးကူးပါတယ်။
2. Droplet transmission အမှုံလေးတွေကနေကူးခြင်း။ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေ၊ စကားပြောရာကနေ ကူးတယ်။
3. Airborne transmission လေထဲကနေကူးခြင်း။5µm ထက်ငယ်တဲ့ အမှုံအမွှားလေးတွေက လေငွေ့၊ ရေငွေ့ ပျံတာထဲမှာ ပါနေနိုင်တယ်။ သူတို့ထဲမှာ ပိုးတွေပါနေမယ်။ နောက်တယောက်က အသက်ရှူတဲ့အခါ ပါသွားမယ်။ ဒီလိုမဖြစ်စေအောင် လေကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရေး၊ ကြံခိုင်ရေးတွေ လုပ်နေရပါမယ်။ Legionella, Mycobacterium tuberculosis ဗက်တီးရီးယားတွေအပြင် Rubeola နဲ့ Varicella viruses ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
4. Common vehicle transmission ကြားခံကသက်မဲ့တွေတဆင့်ကူးခြင်း။ အစားအသောက်၊ ရေ၊ ဆေးဝါး၊ ကရိယာပစ္စည်းတွေကနေ ကြားခံပြီး ကူးတယ်။
5. Vector borne transmission ကြားခံသက်ရှိအကောင်လေးတွေကနေတဆင့်ကူးခြင်း။ ခြင်၊ ယင်၊ ကြွက်၊ ပိုးဟပ်၊ စသည်။
လူနာဖြစ်နေရခြင်း၊ အသက်ကြီးခြင်း၊ လမစေ့ပဲမွေးလာရခြင်း၊ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးထားလို့ ကိုယ်ခံအားကို တမင်ကျစေအောင်ဆေးသုံးနေရခြင်း၊ ဓါတ်ကင်နေရခြင်း၊ ကင်ဆာဆေးသုံးနေရခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းပိတ်ရောဂါ ရှိနေသေးခြင်း၊ ကိုယ်ထဲကို စမ်းသပ်ကရိယာ၊ ဆေးကုသကရိယာတွေ ထည့်သွင်းခံရခြင်း၊ ပိုက်အမျိုးမျိုးတပ်ထားရခြင်း၊ ပိုးသေဆေး၊ လေနာဆေးသောက်နေရခြင်း၊ သွေးသွင်း၊ ဆေးသွင်းရခြင်း၊ ဆေးထိုးရခြင်း၊ ဆေးထည့်ရခြင်း။
ဗက်တီးရီးယားက ထိပ်မှာရှိတယ်။ MRSA ဆိုတာ ဆေးယဉ်တဲ့ S. aureus ပိုးကနေဖြစ်တယ်။ သူက ဂရမ်-အပေါင်း အမျိုးအစား နဲ့ ဂရမ်-အနုတ် အမျိုးအစားက Acinetobacter baumannii ဖြစ်တယ်။ နောက်အမျိုးအတွက် ဆေးက ရှားသေးတယ်။ Polymyxin-type antibacterials ဆေးမျိုးနဲ့ကုမှရမယ်။ နောက်တမျိုးက ဂရမ်-အနုတ်၊ ဆေးယဉ်တဲ့ Klebsiella pneumonia နူမိုးနီးယားပိုး ဖြစ်တယ်။ (နိုဆိုကော်မီကယ်) ကူးစက်ရောဂါတွေထဲက သုံးပုံတပုံဟာ ကာကွယ်လို့ရတာတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
• ဆေးရုံတွေမှာ Hospitals sanitation protocols သန့်ရှင်းရေးလက်စွဲထားကြရတယ်။ ယူနီဖေါင်း၊ ကရိယာ ပစ္စည်း၊ ဆေးကြောလျှော်ဖွတ်ခြင်း စတာတွေအတွက် ဘယ်လိုဘယ်ပုံလုပ်ရမလဲ အားလုံးစုံ ရေးထားပြီး လိုက်နာကြရတယ်။ စစ်ဆေးနေရမယ်။
• ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူများအားလုံးအတွက် (ချက်-လစ်)
- လက်တွေကို ဆပ်ပြာ + ရေနဲ့ လိုအပ်လာတိုင်းဆေးပါ။ လိုအပ်သေးချိန်မှာ အရက်ပျံသုတ်လိမ်းပါ။
- လူနာအရေပြားကို ပိုးသန်ဘို့ရာ Chlorhexidine ၂% ပါတဲ့ဆေးရည် တမျိုးသုံးပါ။ တခြားဆေးလည်း သုံးနိုင်တယ်။
- နှာခေါင်းစီး၊ Cap ခေါင်းစီး၊ ပိုးသန့်ပြီးဝတ်ရုံ၊ ပိုးသန့်ပြီးလက်အိတ်တွေ သုံးပါ။
• Sterilization ပိုးသန့် နည်းတွေထဲမှာ Chemicals ဓါတုနည်း၊ Ionizing radiation ဓါတ်ရောင်ခြည်နည်း၊ Dry heat အပူခြောက်၊ Steam under pressure ရေနွေးငွေ့ + ဖိအားနည်းတွေပါတယ်။
• ကူးစက်ဆောင်မှာ သီးသန့်ခွဲထားတာ လိုအပ်သူတွေအတွက် လုပ်ရမယ်။
• ဆေးရုံကိုလာသူတိုင်းလဲ ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေက ညွှန်သလို လိုက်နာကြရမယ်။
• လက်အိပ်ကနေ ဆရာဝန်ဆီကရောဂါကို လူနာကိုရော၊ လူနာဆီကနေ ဆရာဝန်ဆီသမကာ လူနာ တယောက်ကနေ နောက်တယောက်ကို ဆရာဝန်ဆီကတဆင့်ကူးမှာကိုပါ ကာကွယ်တယ်။
• မျက်နှာပြင် ပိုးသန့်ခြင်းနည်းရှိတယ်။ စားပွဲ၊ ကုတင်၊ ထိုင်စရာ စသည်။
• Antimicrobial copper alloy ကြေးနီသတ္တုရောက ကောင်းတယ်။
• NAV-CO2 နည်းက ခေတ်မီနည်းဖြစ်တယ်။
• Hydrogen peroxide vapor ဟိုပ်ဒရိုဂျင်-ပါအောက်ဆိုက် ဓါတ်ငွေ့နည်းလဲ ကောင်းတယ်။
• အေပရွန် (ကိုယ်ကာအစ) သုံးကြရမယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းကနေ ပိုးဝင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။
အမှန်က မခွဲခင် ခွဲရမဲ့နေရာ၊ ခွဲရာမှာသုံးတာမှန်သမျှ၊ ခွဲရာမှာ ပါနေသူအားလုံး စနစ်တကျ ပိုးသန့်ထားတဲ့ အခင်းအကျင်းမှာ ခွဲရတယ်ဆိုရင် ခွဲပြီးပေမဲ့ ပိုးသေဆေး တခုမှတောင် ပေးစရာ မလိုပါ။ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ကြိုတင်ပေးတာမျိုးလဲ လုပ်ဘို့မလိုပါ။ လိုပြီဆိုကတည်းက တနေရာမှာ တခုခုလိုသွားတာဖြစ်မယ်။
ဒီလိုကူးစက်မှုတွေ ဘာလို့ဖြစ်ပါသလဲ။ ဆေးရုံမှာ တာဝန်ရှိသူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးတာ မမှားပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို အတိအကျ မလိုက်နာတာကနေ ဖြစ်ပါမယ်။ အတွင်းလူနာဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက ကျန်းမာရေး အတော်ချို့တဲ့နေတာမို့လဲ ခံနိုင်ရည် နည်းနေကြလို့ ကူးစက်ရောဂါတွေက ပိုဆိုးတယ်။ လူနာတဦးကို ပြုစုပေးပြီး နောက်တဦးဆီ ကူးလုပ်ပေးရာကနေ လူနာအချင်ချင်းကြား ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေက "ကယ်ရီယာ" လုပ်ပေးနေသလို ဖြစ်စေနိုင်သေးပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေကို အပြစ်ဖို့ပြီးတဲ့နောက် ဆရာ့ဆရာတွေကို အပြစ်တင်ပါရစေ။ (မဆလ) ခေတ်မှာ ပညာကို အားမပေးလို့ တတ်သိတာမှန်သမျှ အသုံးချမရခဲ့ပါ။ လက်ဆေးရမှန်းသိပါရဲ့ ဆပ်ပြာဝယ်ဘို့ရာ ဘတ်ဂျက်ထဲမပါပါ။ အရက်ပျံဆိုတာလဲ ငါးနှစ်စီမံကိန်းထဲ ထည့်ဆွဲပုံမရပါ။ ဒါတွေက ကြာခဲ့ပြီမို့ထားလိုက်ပါဆို ထားပါ့မယ်။ အခုကော လိုချင်တာမှန်သမျှ အားလုံး ရနိုင်နေပါပြီတဲ့။ အခုမေးခွန်းမေးလာတာဟာ တိုးတက်လာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ဗျာ "လူနာကို အဝယ်ခိုင်းရတာကတော့ တိုးပျက်လာတာ မဟုတ်ပါလား။" လူနာဆိုတာ မရှိလို့ ရောဂါရသူက ပိုများပါတယ်။ ရောဂါတော့ ပျောက်ချင်ပါရဲ့၊ ဘာမဆို ငွေပေးမှ ဆေးရုံတွေကလဲ လုပ်ပေးတာမို့ ကူးကာမှကူးပေါ့ ကံတရားအားကိုးရမှပဲဆိုသူတွေက အလွန်ကြီး များနေတယ်။
ကောင်းပေ့ဆိုတာမှန်သမျှ သန့်ပေ့ဆိုတဲ့ အရည်အချင်း ပါရတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်း၊ သားဖွါးခန်းတွေမှာ ပိုးတွေရှိနေရင် နံရံကအစ ခွါချပြီး အသစ်လုပ်ကြရပါတယ်။ မြန်မာတပြည်လုံးမှာ နံရံဆေးသုတ်နည်းနဲ့ ကူးစက်ရောဂါကင်းသွားမှာ မဟုတ်သလို၊ အစစခွါချပြီး ပြုပြင်နိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းအားပေးကြပါစို့။